Ganacsiga Suuqa Ceerigaabo oo hoos u dhacay | KEYDMEDIA ENGLISH
Hoos u dhac aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa ganacsiga suuqa magaalada Ceerigaabo, ee gobolka Sanaag, taas oo ka mid ah goobaha uu ka arrimiyo maamulka Somaliland.
CEERIGAABO, Soomaaliya - Hoos u dhaca ku yimid Ganacsiga suuqan ayaa billawday, tan iyo wixii ka danbeeyey markii si qasab ah magaaladaasi looga saaray dadkii ka soo jeeday koonfurta dalka, oo iyagu iminka lagu celiyey deggaannadoodii.
Suuqa waxaa ka baxay tartankii dhanka ganacsiga, iyadoo badeecadaha kala duwan ee suuqa yaallana ay noqdeen kuwa sara u kac uu ku yimid, maadaama ay iibinayaan shakhsiyaad gaar ah.
Dadka Ceerigaabo ayaa ku sheegaya, in loo darsaday ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo iyagu saameyn badan ku lahaa howlaha ganacsi ee ka jiray gudaha magaaladaasi.
Kuwa dan'yarta ayaa kuu sheegaya, in dadkaasi ay iibin jireen badeecado qiimahoodu uu kala duwan yahay, oo la jaan qaadi kara qof walba halka uu nolosha dhaqaale ahaan kaga jiro.
Ganacsatada ka soo jeeda Ceerigaabo ayey ku tilmaameen, kuwa fursad u arkay bixitaankii dadkii koonfurta dalka ku abtirsanayey, waxana iminka inuu istaago ku dhaw howshii ganacsiga ahayd ee xowliga ku socotay.
Fikirka dadkaasi waxaa mid ka duwan qaba ganacsatada Ceerigaabo oo ku andacoonaya, in hoos u dhaca ganacsiga uu sabab u yahay, sara u kac ku yimid maciishada iyo agabka kale ee daruuriga ah.
Weli qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qasabka ahayd, ay goobihii ay ku noolaayeen Somaliland uga soo saartay, ayaa wajahaya xaalad adag, iyadoo qeybtood aanay ilaa iyo iminka helin goobo ay ku bandhigaan saameyntii ganacsi ee ay lahaayeen.